Shukulaatada Daboolida Strawberries Tutorial - Sugar Geek Show - Nacnac
Sida loo sameeyo strawberry-ka shukulaatada daboolan ugufiican, sida loo hagayo oo dhameystiran! Laga soo bilaabo shukulaatada ugufiican ee la isticmaalo, sida loo dhalaaliyo, iyo sida loo ilaaliyo shukulaatadaada shukulaatada daboolan inay eegto oo dhadhamiso sida ugu fiican!
Casharkaan, waxaan dul mari doonnaa sida loo dhalaaliyo shukulaatada cad, shukulaatada madow, iyo shukulaatada caanaha. Waxaan ka hadli doonnaa waxa heerkulka ah ee lagu xanaaqayo shukulaatada, sida loogu xanaaqayo microwave, iyo sida loo sameeyo habka abuurka soo jireenka ah ee kuleylka labajibaaraha ah.
Shukulaatada Ay Ku Daboolan Waxyaabaha Strawberry Ka Kooban
Khudaarta cagaaran ee cusub, shukulaatada macaan, iyo 20 daqiiqadood dhammaantood waxaad runtii u baahan tahay inaad sameysid miraha miraha shukulaatada daboolan. Kahor intaadan quusin, hubi inaad ka aqriso qoraalkan blogka ama aad u daawato fiidiyowga tan oo ah talooyin iyo tabaha guusha.
Sida loo sameeyo strawberries inay sii dheeraadaan
Strawberries waxay si xun ugu dhaqaaqaan qaboojiyaha si deg deg ah. Waxay noqon kartaa wax laga xumaado inaad aragto jaantuska strawberries ee aad heshay laba maalmood ka hor si lama filaan ah u koraya caaryada! Ha welwelin, waad iska ilaalin kartaa in mirahaaga strawberries ay xumaadaan kahor-bislaan adigoo ku maydhaya weelka khalka lagu qasi jiray. Ku maydhista khalkan waxay dishaa bakteeriyada iyo kudka caaryada waxayna ka dhigtaa mirahaaga strawberries inay sii socdaan ilaa toddobaad ka dheer!
Sida loo sameeyo maydhashada strawberry-ka
Isku dar 4 koob oo biyo qabow iyo 1 koob oo khal cad ah (aan nadiifin khalka)
Ku qoo jeerigaaga miraha maydhashada 10 daqiiqo. Waxaan ogaaday in miraha sida caadiga loo beero ay u shaqeeyaan si ka wanaagsan sida loo yaqaan 'strawberries' faashada shukulaatada.
Ka daadi biyaha ka dibna biyo raaci mirahaaga 'strawberries', ka dibna ku QAADO SI DHAQAN leh tuwaal warqad ah. Hubso inay aad u qalalan yihiin ama shukulaatada aysan ku dhegi doonin miraha geedaha 'strawberries'. Waxaan u daayay hawadayda inay qallajiso intaan shukulaatada diyaarinayo. Haddii aad waqti haysatid, waxaad ku ridi kartaa miraha strawberries tuwaal warqad ah dusha sare ee qaboojiyaha (si ay hawadu u socoto) ka dibna ku dhig iyaga oo aan daboolnayn qaboojiyaha habeenki si ay si buuxda u qalalaan.
Talo-siin: Aaladda strawberries-ka ee heerkulka qolka ayaa ugu fiican in lagu shubo shukulaatada! Haddii mirahaaga strawberry-ka horey loo dhaqay oo ay ka soo baxeen qaboojiyaha, u oggolow inay diirimaad yeeshaan saacad ka hor intaadan quusin si looga fogaado in shukulaatada si dhaqso leh loo qaboojiyo, looga hortago dildilaaca, iyo in laga hortago miraha dhadhanka ah ee miraha oohinta leh.
Miyaad ku haysaa caleemaha mirahaaga strawberries?
Dadka qaarkiis waxay ka saaraan jirridaha markay miraha ku shubayaan laakiin khubaro ayaa leh iska daa. Sababta Sababtoo ah markaad ka saarto jirridda, asal ahaan waxaad ka furaysaa god weyn geedkaaga strawberry. Qabsashadaas ayaa daadin doonta casiir, waxay midabeyn doontaa shukulaatadaada, waxayna guud ahaan yareyneysaa nolosha shukulaatadaada shukulaatada daboolan.
Waa maxay shukulaatada ugu fiican ee lagu miro strawberries?
Waxaan sameeyay tijaabo anigoo adeegsanaya dhamaan shukulaatada aan ka heli karayay si aan u arko kuwa ugu wanaagsan dhalaalida. Waxaad u isticmaali kartaa nooc kasta oo shukulaato ah oo leh subagga kookaha waxyaabaha ku jira laakiin maskaxda ku hay in shukulaatada oo dhami aysan DHAMMAAN. Shukulaatada qaarkeed oo leh boqolkiiba kookaho ama ay kudarsadeen xasiliyayaal (sida shukulaatada shukulaatada) oo laga yaabo inay aad udhacdo markii lagu dhalaaliyo heerkulka kuhaboon, marka tijaabada marka hore dhalaal ama isticmaal sumad kaheesa liistada hoose.
shukulaatada shukulaatada Ghirardelli semi-sweet-ka dhalaalay
Dufanka Guittard-ga ah ee macaan-dhalaalka ah
Kuwani waa labadaba shukulaatada semi-macaan labadaba si yaryar loo jarjaray oo lagu dhalaalay microwave-ka ilaa 90ºF. Waxaad arki kartaa jajabku inay dabiici ahaan ka dhumuc weyn yihiin canjeerada. Labaduba way fiican yihiin in la dhex geliyo miraha loo yaqaan 'strawberries' laakiin ma rabi doontid inaad u isticmaashid jibbaarro sameynta waxyaabo sida bambooyin kookaha kulul maxaa yeelay aad buu u qaro weyn yahay.
Waxaa laga yaabaa in lagugu duufsado inaad gaarto boorsadaas nacnaca dhalaalaysa ama jilicida yicibta maxaa yeelay ma dooneysid inaad dhib ku qabtid shukulaatadaada laakiin waan kuu ballan qaadayaa, shukulaatada ugu fiican ee shukulaatada daboolan, waxaad dooneysaa inaad isticmaasho shukulaatada dhadhanka fiican leh!
Nacnac dhalaalaya iyo yicibta yicibta badanaa waxaa laga sameeyaa wax. Oo intay fududahay in la isticmaalo, waxay u dhadhamaysaa sida shamac oo kale. Ha welwelin! Dareemida shukulaatadaada waa u fududahay sida loo shaqeeyo microwave. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa heerkulbeeg si loo hubiyo heerkulkaaga oo waad fiicnaan doontaa inaad tagto! Shukulaatada dabacsan ayaa ka xoog badan, dhalaal badan, waxayna ku xasilan tahay heerkulka qolka.
Waan jeclahay dhadhanka iyo xasilloonida shukulaatada qadhaadh laakiin sidoo kale waxaad isticmaali kartaa shukulaatada caanaha ama shukulaatada cad. Waa kuwan qaar ka mid ah shukulaatada aan jeclahay in la isticmaalo.
Baararka Nacnaca Lindt (cadaan, shukulaatada caanaha, ama mugdiga, si fiican u jar ka hor dhalaalkeeda)
Callebaut mugdi ah (Maya. 811 54%)
Callebaut cad (maya. W2 28%)
Guittard Semi-Macaan canjeero (aan ugu jeclahay maxaa yeelay dhadhankiisu aad buu u fiican yahay oo qaali ma'aha)
Ghirardelli Semi-Chips Chips Chips (in yar oo dhinaca qaro weyn leh wali way kufiican tahay quusin)
Waxaan isku dayay inaan dhalaaliyo Shukulaatada Ruby microwave-ka laakiin ma aysan shaqeyn. Way fiicnaan lahayd haddii aad isticmaashay habka abuurka halkii aad ka isticmaali lahayd microwave-ka.
Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida loo xanaajiyo noocyada kala duwan ee shukulaatada, ka eeg kaankayga shukulaatada fudud video tempering halkan.
Wixii shukulaatada caanaha , heerkulku waa inuusan ka sarreynin 84ºF (30ºC) si aad u degto xanaaqa
Wixii shukulaatada cad , heerkulku waa inuusan ka sarreyn 88ºF (31ºC) si aad u degto xanaaqa.
Wixii Shukulaatada Semi-macaan iyo madow , heerkulku waa inuusan ka badnaan 90ºF (32ºC)
Waad ku xanaaqi kartaa shukulaatadaada microwave ama waxaad ku sameyn kartaa kuleeliyaha laba-jibbaaran. Microwave-ka ayaa ugu fiican qadar yar oo shukulaato ah iyo kuleylka kuleyliyaha ah wuxuu ka fiican yahay hadaad rabto inaad shukulaato badan hal mar ka wada adkaato oo aad amar weyn hesho. Waxaan ku sharaxi doonaa labada habraac xagga hoose si aad u go'aansato midka adiga kugu habboon.
Sidee looga careysiiyaa shukulaatada microwave-ka
Ku shukulaatada xanaaqa microwave-ka , waxaan si fudud ugu jarjaraynaa sida ugufiican ee aan kari karno (haa xitaa haddii ay kujirto jajabyo), ka dibna ku dhalaalno koror aad u gaaban oo ku jira microwave-ka. Weligaa ha uga sii darin heerkulka shukulaatada noocaas ah.
Xusuusin: Waxaan u isticmaalayaa microwave 1,000-watt ah hawshayda.
Si fiican u jar jukulaatada mindida kuugga.
Shukulaatada ku kululee baaquli kuleylka kuleylka ah 30 ilbiriqsi oo ku jira microwave ka dibna isku walaaq si aad ugu qeybiso kuleylka.
Shukulaatada kuleylka ku dar 10-seken ka dib illaa shukulaatada ay u muuqato qiyaastii 75% dhalaalay oo wali ka hooseysa heerkulka saxda ah. Hubi heerkulka ka dib markasta oo aad kululeyso si aad u hubiso inaadan kululayn. Waxaan isticmaalayaa an heerkulbeegga infrared si loo hubiyo heerkulkayga maxaa yeelay xoogaa way fududahay in la nadiifiyo.
Walaaq illaa shukulaatada si buuxda u dhalaasho. Haddii ay weli jiraan qaybo aan la xoqin, waad kululeyn kartaa 5 ilbidhiqsi laakiin xusuusnow, kordhin kasta oo 10-sekan ahi waa 2 darajo heerkulbeeggaaga.
Hada shukulaatadaadu waa mid kacsan oo diyaar u ah in la isticmaalo!
Oobow! Si kadis ah miyaad shukulaatadaada aad ugu kululeysay? Ha welwelin, weli waad ku xanaaqi kartaa habka abuurka.
Sida loo xakameeyo shukulaatada adoo isticmaalaya laba kuleyliye (habka abuurka)
Ku buuxi digsi 2 ″ oo biyo ah kuna kari kari. Yaree kuleylka dabka kariimka ah.
Dhig baaquli kululaynta dusha biyaha qulqulaya. Biyaha waa inaysan taabanaynin maddiibadda. Shukulaatada aad rabto inaad dhalaasho ku dar baaquli. Tan waxaa lagu magacaabaa biyo kululeeyaha, biyaha lagu maydho, ama a bain-marie. Tani waa hab lagu kululeeyo cunnooyinka jilicsan sida shukulaatada si taxaddar leh si aysan u gubin ama u kululaan.
Shukulaatada si joogto ah walaaq. Ka taxaddar inaadan biyo ku helin shukulaatada ama way qabsan doontaa oo lama isticmaali karo.
Sii wad kareyso shukulaatada illaa inta ay dhalaalayso heerkulkuna ka akhrinayo inta u dhexeysa 110ºF - 120ºF.
Ka saar shukulaatada biyaha ka tirtir baaquli si aad uga hortagto in wax dhibco ah oo biyo ahi ka soo galaan shukulaatadaada.
Shukulaatada ku shub baaquli kale oo nadiif ah oo qallalan si aad isla markiiba u hesho si uu ugu bilaabo qaboojinta dhaqso.
Googaa xoogaa shukulaato badan oo dabacsan isla markaana ku dar shukulaatada dhalaalay oo walaaq. Shukulaatada shidan ee shukulaatada ah ayaa 'abuuri doonta' shukulaatada aan la qaboojin ee leh kareemada saxda ah waxayna dib u qaboojin doontaa dhammaan shukulaatada.
Marka shukulaatada lagu daray ay dhalaasho, hubi heerkulka, haddii aad wali ka sarreyso 90ºF, ku dar xoogaa shukulaato ah. Mar alla markii aad ka hoos marto 95ºF shukulaatada ayaa qaadan doonta waqti dheer si ay u dhalaasho sidaa darteed waxaa fiican in la isticmaalo shukulaatada si fiican loo jarjaray.
Marka shukulaatadaadu qaboojiso 90ºF , waa inaad kaliya haysataa dhowr xabbo oo aad u yar oo shukulaato aan la karin ah oo ku jirta baaquli. Sii wad kareyso 5 daqiiqo kasta illaa shukulaatada ay gaarto 80ºF shukulaatada caanaha, 84º cad, iyo 86º shukulaatada mugdiga iyo macaan-macaan.
Ka dib marka shukulaatadaadu ay gaarto heerkulka ugu hooseeya, markaa waad awoodi kartaa si taxaddar leh u kululee heerkulka shaqeeya. 84ºF caano, 88ºF cadaan, 90ºF mugdi, iyo macaan udgoon.
Sida loo sameeyo strawberries shukulaatada daboolan talaabo talaabo
Haatan waxaan diyaar u nahay inaan sameyno shukulaatada shukulaatada daboolan! Waxaan u maleynayaa in strawberries-kaaga hadda la dhaqay, la qalajiyey, heerkulka qolka, iyo shukulaatadaada ayaa la qaboojiyey.
sida loo akhriyo cabirka cuntada dhijitaalka ah
Waxa ugu horreeya ee aan sameeyo ayaa ah inaan sameeyo saldhiggeena 'strawberry dipping station'. Beerkeyga, shukulaatada, warqadda soo daatay, bacda tuubbada ee daadinta, iyo xaashi xaashi leh warqad kale oo badan ayaa dhammaantood diyaar u ah inay baxaan. Waxaad dooneysaa wax walba inay diyaar ahaadaan si aad u dhex gasho inta ugu macquulsan intaan shukulaatadaadu bilaaban qabow badan.
Haddii shukulaatadaadu bilaabato qabow aad u badan, dib-u-kululee 5-ilbiriqsi oo koror ah kuna walaaq si aad uga hortagto kuleylka badan.
Tallaabada 1 - Ku dhaji miraha geedka 'strawberry' asliga, kuna dhex dar shukulaatada. Waxa kale oo aad gelinkartaa laba barkin-caday labada dhinac ee jirridda si ay uga caawiso xasilinta miraha waaweyn isla markaana ay ugu fududaato faleebada. Ku soo ururi caleemaha hareeraha ilkaha ilkaha si looga ilaaliyo inay galaan shukulaatada.
Tallaabada 2 - Ku shub miro yar 'strawberry' shukulaatadaada. Waxaa laga yaabaa inaad u baahatid inaad shukulaatada ku shubtid koob si ay ugu qoto dheer tahay berry inay gebi ahaanba quusto. Waxaad dooneysaa inaad gebi ahaanba daboosho miraha loo yaqaan 'strawberry' si looga hortago daadinta.
Tallaabada 3 - Kibir miro yar dusha sare ee shukulaatada dhowr jeer si aad uga saarto shukulaatada xad dhaafka ah.
Tallaabada 4 - Si tartiib ah u xoq dhinaca berkedda si aad uga saarto shukulaatada xad dhaafka ah. Ha xoqin wax aad u adag, ma doonaysid inaad aragto salka geedka berry ama waxyeello u gaadho berry sinaba.
Tallaabada 5 - Berry saar warqadda soo-baarka ka dibna 5 ilbidhiqsi ka dib soo qaado oo ku wareeji dhawr inji si aad uga saarto xitaa in ka badan shukulaatada. Tani waxay ka hortageysaa shukulaatada aad u fara badan inay isugu soo dhowaato berry oo ay yeelato barxad weyn oo fidsan.
Tallaabada 6 - U oggolow shukulaatada inay dhigato hal daqiiqo. Haddii aad ku darsanaysid rusheeyaha markaa waad ku dari lahayd ka hor inta uusan shukulaatada dhicin.
Tallaabada 7 - Ku hay miraha 'strawberry' asliga ama burushka ilkaha dusha maddiibadda oo ku shub shukulaato aad u qaboojisan adoo isticmaalaya dhaqdhaaqyo dhaqso iyo gadaalba leh. Waxaad isticmaali kartaa shukulaato isku mid ah ama midab isku mid ah. Dillaac ahaan, waxaan si fiican u jarjari lahaa xoogaa shukulaato ah oo aan ku xanaaqi lahaa microwave-ka. Waxaan jecelahay inaan isticmaalo boorsada tuubada iyadoo caarada si dhib yar loo jarjaray si ay u dhacdo darajo aad u fiican.
Sida Loo Midabeeyo Shukulaatada
Si aad u midabeyso shukulaatadaada cad, waxaad ku dari kartaa wax yar oo dhalaalaya subagga kookaha midabka leh ama waxaad u isticmaali kartaa midabaynta cuntada saliida ku saleysan si aad uhesho oo u qulqusho. Waxaan jeclahay inaan isticmaalo midabada subagga kookaha ee caagga cunnada .
Kaliya ku dhalaali subaggaaga kookaha dhalada ku jirta microwave-ka. Waxaan ku bilaabayaa hal daqiiqo ka dibna ku samee kordhin 15-seken ah. Dhalada ayaan ku tuujinayaa inta u dhexeysa kululaynta si aan u walaaqo. Waxaan isku dayaa inaan kululeyn-maxaa yeelay haddii ay aad u kulushahay waxay shukulaatada ka tuuri kartaa xanaaq.
Ku dar xoogaa subagga kookaha ah shukulaatadaada dhalaalay oo walaaq! Taasi waa waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso! Hadda waxaad ku dhex qasan kartaa mirahaaga shukulaatada midabka leh ama waxaad u isticmaali kartaa qulqulo sidii aan sameeyay.
Sideen u keydin karaa shukulaatada shukulaatada daboolan?
Ku keydi shukulaatada shukulaatada daboolan qaboojiyaha ku hay sariir qaboojiye leh tuwaal waraaqo ah hoosta. Si qafiif ah ugu dabool baakad balaastik ah si aad uga ilaaliso in miraha geedka qalalan (qalalan) laakiin ku keydin haanta hawo-qaadka ah ama wey sameysan doonaan. Strawberries waxay u baahan yihiin hawo!
Mudo intee le'eg ayay shukulaatada daboolan miraha ugu dambeeya ay soconayaan?
Shukulaatada daboolan strawberries waxay ku jiri doontaa qaboojiyaha ilaa 48 saacadood, laakiin dhadhanka ugu fiican markay cusub yihiin! Way dhaqso badan yihiin wayna fududahay in la sameeyo, waxaa fiican inaad mirahaaga dhaqdo habeen ka hor, u ogolow inay ku qallajiso qaboojiyaha, ka dibna ku shub maalinta aad qorsheyneyso inaad cunto. Waxay socon karaan ilaa 12 saacadood heerkulka qolka.
Sida loo xirxiro miro-shukulaatada daboolan shukulaatada
Xirfadleyda badankood waxay dhigaa shukulaatada-shukulaatada-daboolan shaashadda koobabka ka dibna sanduuq wanaagsan. Waad ku dari kartaa warqad qurxoon hoosta ama aad uga tagto sida ay tahay oo kale. Ha ku duubin mirahaaga strawberries xirmada balaastigga ah maxaa yeelay si dhaqso leh ayey u qoyaan doonaan oo midab bay u noqonayaan.
Kukiyada Sonkorta Maalinta Jacaylka ee Marbled
Cake Valentines Day Muraayada Glaze
Sidee Looga Cadhoodaa Shukulaatada
sida keega loo dhigo qabow
Bambooyin Shukulaatada Wadnaha Kulul
Sida loo sameeyo strawberry shukulaato qurux badan leh oo macaan iyadoo la isticmaalayo caano, shukulaato madow iyo caddaan ah. Hel talooyin ku saabsan sida loo dhalaaliyo shukulaatada si bilaa cillad ah, midab shukulaatada midab leh, oo aad u dhigto mirahaaga shukulaatada daboolan inay sii socdaan inta ugu macquulsan. Waqtiga Diyaarinta:shan iyo toban daqiiqado Qaboojinta:10 daqiiqado Wadarta Waqtiga:25 daqiiqado Kalori:83kcal
▢24 dhexdhexaad ah (288 g) strawberries 16 wiqiyadood
▢8 ounces (227 g) shukulaatada nus-macaan jar jartey
▢8 ounces (227 g) shukulaatada caanaha jar jartey
▢8 ounces (227 g) shukulaatada cad jar jartey
▢4 koobabka (946 g) biyo qabow
▢1 koob (255 g) khal khal ah
▢Saxan dhalaal, dhalo ama silikoon
Isku qas biyaha iyo khalka baaquli weyn
Ku dar miro dhalatada oo ha u qoyso 10 daqiiqo
Hubso in mirahaaga strawberries ay yihiin kuwo cusub oo iska tuur iyo strawberries leh cilado ama nabarro. Tani waxay sababi doontaa in mirahaaga strawberries ay bilaabaan inay ooyaan maalin kadib.
Raaci miraha 'strawberries' biyo nadiif ah, si fiican u qalaji, ka dibna ku wareeji sariir qaboojin leh waraaqo tuwaal ah.
Si khafiif ah u dabool miraha miraha ku duuban balaastigga oo geli qaboojiyaha haddii aadan isla markaasba adeegsanayn. Hubso in mirahaaga strawberries yihiin heerkulka qolka ka hor intaadan quusin.
Kala dhalaalida shukulaatada
Si fiican u jarjar shukulaatadaada (haa xitaa haddii aad isticmaaleyso jajab) si shukulaatadaadu si fudud ugu dhalaasho. Haddii aad u baahan tahay inaad dhalaasho wax ka badan 8 wiqiyadood oo shukulaato ah markiiba waxaan kugula talinayaa inaad adeegsato sida loo xanaaqo shukulaatada iyadoo la adeegsanayo habka abuurka ee balooggeyga.
Nidaamka dhalaalida waa isku mid dhamaan shukulaatada marka laga reebo shukulaatada caanaha waa inaan la kululeynin wax ka sareeya 86ºF (30ºC), shukulaatada caanaha oo aan ka badneyn 88ºF (31ºC), iyo macaan macaan iyo mugdi aan ka badneyn 90ºF (32ºC). Waxaan soo jeedinayaa in la dhalaaliyo oo la liqo hal nooc oo shukulaato ah markiiba.
Shukulaatada la jarjaray ku rid baaquli caddaynaya kuleylka.
Shukulaatada ku shub awoodda buuxda ee microwaveka 30 ilbiriqsi ka dibna walaaq si aad ugu qaybiso kuleylka si siman dhammaan shukulaatada.
Sii wad kuleylka shukulaatada 10-15 kordhinta labaad ilaa shukulaatada qiyaastii 90% dhalaasho oo wali ka hooseyso heerkulka ugu badan ee nooca shukulaatada aad isticmaaleyso.
Sii wad inaad walaaqdo shukulaatada illaa ay si buuxda u dhalaasho. Haddii shukulaatadaadu ay bilaabato inay qaboojiso 5 darajo walina aad hayso qaybo aan dhalaalin, waxaad kusii wadan kartaa kululaynta 5 ilbidhiqsi oo koror ah illaa ay dhalaalayaan laakiin aad uga taxaddar inaadan dhaafin xawligaaga max. Haddii aad dhaafto wali waad xanaaqi kartaa shukulaatadaada adoo adeegsanaya habka abuurka (eeg xiriirka ku jira qoraalkayga)
Marka shukulaatadaada la dhalaaliyo waad quusin kartaa mirahaaga strawberries. Ku dhaji miraha 'strawberries' asliga ah kuna dhex dar shukulaatada diiran. Shukulaatada xad-dhaafka ah ka xoq dhinaca hoose ee berry laakiin ha dhaawicin salka geedka berry.
Dhig shukulaatada daboolan miraha xajmiga warqadda soo-saarka ah oo u oggolow inay dejiso. Shukulaato badan ku maydh dusha bacaha tuubada si aad u qurxiso haddii aad rabto. Haddii aad rabto inaad ku darto rusheeyaha, ku dar ka hor intaan shukulaatada dhicin.
Ku keydi mirahaaga qaboojiyaha si khafiif ah ugu daboolan duubka balaastigga ah ilaa 48 saacadood laakiin iyagu waa kuwa ugu fiican uguna casrisan maalinta la sameeyay. Haddii aad cunaysid isla maalinta aad sameyso, uma baahnid inaad qaboojiso.
Tilmaamaha guusha Ku dhaq miro dhanaan ah khalka / xalka biyaha si aad u dheereyso nolosha miraha geedo yaryar Si qallalan u qalaji mirahaaga strawberries si aad uga ilaaliso inay xumaadaan Ku shukulaato shukulaatadaada microwave (qadar yar) ama adoo isticmaalaya labo kululeeye (qadar aad u badan) si shukulaatadaadu si adag u dhigto, u dhalaalato, oo dhadhamiso macaan Ku xoq mirahaaga geedaha 'strawberries' ilaa geedka si aad uga hortagto wax daadanaya U isticmaal burushka ilkaha jirridda asliga markii aad xoqayso miraha geedaha 'strawberries' si aad taageero dheeraad ah u hesho Ku cun strawberigaaga 24 saac gudahood natiijooyinka ugu fiican!
U adeegida:5strawberries|Kalori:83kcal(4%)|Kaarboohaydraytyada:9g(3%)|Protein:1g(laba%)|Dufan:5g(8%)|Dufan Dufan:3g(shan iyo toban%)|Kalastarol:1mg|Sodium:8mg|Kaliumperyamper:72mg(laba%)|Fiber:1g(4%)|Sonkor:8g(9%)|Vitamin A:labaIU|Vitamin C:7mg(8%)|Kaalshiyam:17mg(laba%)|Bir:1mg(6%)
sida loo sameeyo keega foosto
karinta cad ee yicibta labeen dhanaan laga bilaabo xoq
muxuu dhadhamiyaa keega jilicsan ee jilicsan
Cuntada Macaron ee Faransiiska
Cunto macaroon Faransiis ah tallaabo-tallaabo. Sida laysugu daro batteriga, sida loo tuubo iyo sida dhibka loo toogan karo. Cunto macruufka ugu fiican.
Keeg udgoon udgoon udgoon oo aad ufiican oo lagu sameeyay subag caano ah, jiis baraf ah oo dhalaalaya iyo bocorka nacnaca marzipan ee dusha sare leh!